5 Ulawulo oluphambili lokuqonda uDonald Trump
Ngaphantsi konyaka kumongameli kaDonald Trump , kunomnye umbandela wokulawula kwakhe wonke umntu onokuvumelana ngawo: Akufani naluphi na iNdlu ye-White yasekuqaleni kwimbali yase-United States. Ingaba ubona ukuba njengokuphazamisa iipolitiki njengesiqhelo kukuphucula okanye ukulimaza ilizwe, inyaniso yinto yonke into eyenziwa yiCandelo loLawulo lweTrasti ukususela ekuthathweni kweofisi kubonakala kungenakwenzeka, ingxabano , okanye zombini.
Indlu kaVimba eNtlu ngokuqinisekileyo ayiyiyo yolawulo lokuqala lokusebenza phantsi kwefu lokuphikisana, okanye ukungahoyi iindlela eziqhelekileyo zokwenza izinto eWashington, DC Indlela efanelekileyo yokuqonda indlela eyahlukileyo ngayo umongameli we-White House ka-45 ukusuka kwimimiselo yembali kukuba uhlolisise ezinye iinkqubo eziphambuke kwiimimiselo, ukuthabatha ngokunyanisekileyo kwizinto ezingenakwenzekayo, ezingenasiphelo, kwaye (ngenxa yoko) zikhanyisa ububuninzi kwimbali yethu. Iintlanganiso ezihlanu siza kuxubusha apha onke asebenza phantsi koxinzelelo olunzulu kunye neengxabano eziqhubekayo ukuba ulawulo lweTrump okwangoku lujongene nalo, kodwa luqhutyelwa kwimida ethile iNdlu ye-White House ingayinaki okanye iguqule ngokuhlukileyo ukusuka kwiphina i-prior management.
URichard Nixon. Ilitye elingundoqo
Imbali yokuqala yembali abantu abakhulayo ngokubhekiselele kwiTump White House nguRichard Nixon , usengumongameli wethu kuphela ukuba ashiye iofisi (kunye nomnye owayeya kuba ngowesibini ukuba angaphililekanga xa engazange ashiye phantsi). Ukufana kwacaca: U-Nixon wayengumongameli wokuqala ukuphishekela oko ngoku kuthiwa "iSicwangciso soMzantsi" sokubhenela "amalungelo" kunye nezobuhlanga-based "dogwhistle" kwezopolitiko; U-Nixon wayehlala echasisa ukugxekwa ngokubiza umntu othiwa "uninzi lwangenanto" olwamxhasa ngasese; kwaye uNixon waziqhuba ngendlela eyahlulelwa ukuba ayilunganga ngokungafanelekanga ukuba ingekho yecala lolwaphulo-mthetho.
Noko ke, iNixon yinto ethile iTump ngokwakhe ayikho: upolitiki ophumeleleyo onolwazi ngamava. U-Nixon wayekhonza njenge-congressman kwaye njengomphathi-mongameli wase-United States phantsi kweDwight D. Eisenhower, wabuya walahlekelwa ukhetho lwongameli luka-1960 ngoYohn F. Kennedy. Nangona wayesetyenziseni ixesha elidlulayo kuloo iimbali-mlando zibiza ngokuthi "intlango," wayengumntu olawulayo ukhetho luka-1968. NjengeCilongo, i-Nixon idlalwa ukuba ikhulile kwiminyaka emitsha yezopolitiko zaseMelika.
Ngokuqinisekileyo, i-Nixon iya kuhlala ikhunjulwe ngokunyuka kwe- Watergate , ukuphanda kunye neengcebiso ezikhethekileyo, kwaye ngokugqithiseleyo, iinzame zikaNixon zokwehlisa uphando ngokuxhatshazwa nokuphanga abantu, nokusebenzisa kakubi igunya lakhe. Yintoni eyahlula ukulawula kweTrump kwiNixon ngokusisiseko yombuso wezorhwebo waseTrump. Lapho i-Nixon yayingumntu ozinikezelekileyo, umkhonzi othembekileyo ozinikeleyo, ovumelekile ukuba avume i-paranoia kunye nekratshi ngokukonakalisa izigqibo zakhe, iTump iqulethe imingxube yemingcipheko evela kumashishini ayo, imbeka kwindawo ehlukileyo ngokupheleleyo xa ivela kwiimeko cha phazela zakhe izigqibo.
Ukuba ukhangele ukuqonda kakuhle i-Nixon White House, uRoger Morris we-classical biography uRichard Milh u- Nixon: Ukunyuka koMbutho wezoPolitiko waseMelika ungomnye wemisebenzi engcono kunye neyona mininzi kumongameli wethu wama-37.
Andrew Johnson. IfotoQuest
Xa incoko iphendukela kwiTonga, ubuncinane umntu oza kuzisa i-specter ye-impeachment. Nangona abantu abaninzi bengayiqondi inkqubo yokuphambuka - engadingi nje ukubambisana okukhulu kwezo zombini izindlu zeCongress ukuphumeza, kodwa oko kugcinwe ngokuthe ngqo ukuba " ubugebengu obuphezulu kunye nabangalunganga " - kulula ukubona indlela abaphikisi bakaTrump, ekukhanyeni yezoshishino ezikhankanywe ngasentla kunye neengxabano ezivulela iNdlu yeNdlu, ziza kubona ukunyuswa kwezinto njengendlela elula yokumisa iTrump ngaphandle kweofisi.
Ababini ababongameli abaye baphelelwa kwimbali yelizwe lethu: uBill Clinton noAndrew Johnson . UJohnson wayengumongameli we-Abraham Lincoln waza wenyuka waya ku-kamongameli emva kokubulawa kukaLincoln, kwaye wabuyela ngokukhawuleza kwimfazwe neCongress malunga nendlela yokusingatha ukuvuselelwa kwakhona nokuphindwa kwakhona kwemibutho yasezantsi esasibandakanyekile ngexesha leMfazwe yoLuntu. I-Congress yadlulisela imithetho emininzi ezama ukuvimbela amandla kaJohnson ukwenza izigqibo, ngokugqithiseleyo ukuQiniswa kwee-Ofisi yoMthetho (okwakuboniswa ngokungahambisani nomthetho yiNkundla ePhakamileyo), kwaye yaqalisa inkqubo yokuphambana nomthetho xa ephula umthetho. I-White House yaseYohnson yayingumnye wokudideka kwaye ingapheliyo ingxabano kunye nelo legqeba likarhulumente.
Kulula ukubona ukuhambelana neNdlu eNtsundu yeTrump njengoko uphononongo lwakhe uphando malunga nokuphulwa kwemithetho yonyulo, kwaye njengoko egxotha uluhlu olungapheliyo lweemfazwe kunye neCongress - kuquka nabameli kunye nabasenanteni kwiqela lakhe. Ukwahlukana, nangona kunjalo, kukuba uJohnson (oye wahlulwa ngumda wevoti enye kwi-Senate) wayejoliswe ngokucacileyo ngokucacileyo kunye neentshaba zezopolitiko, esebenzisa umthetho omtsha kamva kufumaneka ukuba awukho mthethweni. Iindleko zokuthi iNtendlu eNtsundu ye-Trump ijongene nesigxina phambi kokunyulwa kwakhe, kwaye ezininzi zeentlanzi zithatha inxaxheba ngokwabo. Enyanisweni, iCongress iye yangqineka ukuza kuhlasela okanye ukuphanda ulawulo lweTrump.
UJohnson, nangona esweleke kakhulu ngendlela yokufezekisa, ungumongameli obalulekileyo ngokwemvelaphi ye-ofisi. UMgwebi oyiNtloko weNkundla ePhakamileyo uWilliam H. Rehnquist wabhala enye yeemviwo eziphambili ze-Johnson ukunyanzelisa kwi- Grand Inquests: I-Historic Impeachments yobulungisa uSamuel Chase noMongameli Andrew Johnson.
Omnye umongameli wayehlala eqhathaniswa noTrump ngu- Andrew Jackson , umongameli wethu wesixhenxe kunye nomnye wabaongameli "bokuqala". NjengoTumpump, uJackson wazibheka njengommeli womntu oqhelekileyo ngokumelene ne-elites ekhohlakeleyo, kwaye uJackson wayenomdla kakhulu "kwiimimiselo" zexesha lakhe.
UJackson waguqula uongameli kunye noburhulumente bonke baseUnited States, besuka kwiqela le-oligarchy-esque labahlali abaye baqondisa ilizwe kwiminyaka embalwa yokuqala emva kweNguqulelo kunye negalelo legunya elivela ngqo kubantu. Nangona wayehlala echazela imilinganiselo yokuziphatha neyentlalontle yeso sizukulwana, uJackson wazibonela ukuba unikwe amandla ngokuchanekileyo ngabavoti, ngaloo ndlela ayikho into enomnye umntu. Wabamba ihabhinethi yakhe kunye nabaqeshwa bezentengiselwano abangacingi kakhulu kwiimeko zezopolitiko okanye ukunyaniseka, yaye wayehlala ethetha ngokuthe ngqo kunye nokungahambi kwipolitiki yezopolitiko kangangokuthi ezininzi izandla zaseWashington zafumana ukuhlambalaza.
Ukuphikisana kwenzelwa uJackson njalo. Unqwenela ukulungisa ngokupheleleyo urhulumente, ukunyusa ukupheliswa kwekholeji yokhetho ukwenzela ukhetho oluchanekileyo lomongameli, kwaye ezininzi izenzo zakhe, ezifana nokususwa kwabantu baseIndiya kunye nokuqothulwa kweBhanki yase-United States, kuya Namhlanje kufaneleke kwiinyanga ezininzi zokunikwa kwethelevishini - ngamanye amagama, njengeTump, uJackson wayehlukana kwaye ukulawula kwakhe kwakubonakala kuhlale kungqubuzana.
Ngokungafani neTumpump, uJackson wayejongene noorhulumente osemncinci owayesenokuqulunqa iziganeko ezisemthethweni esizithembele namhlanje, kwaye sisebenzisana nelizwe esele libonakalise ukuqhekeka okuya kubangela iMfazwe Yomphakathi nje emva kwekota leminyaka kamva. Xa iJackson yayinezopolitiko ezinzulu ezijolise ukwenza idemokhrasi ibe yintando yesininzi ngokwenene, iingxabano zokulawula kweTrump zixhomekeke ngakumbi ngenxa yokungabi namava kunye nokuhlonela isithethe kunanoma yini enye.
UJackson ungomnye wethu-obhaliweyo malunga nabaongameli, kodwa omnye wemisebenzi engcono kakhulu yi- American Lion: U-Andrew Jackson kwiNdlu eNtshonalanga , nguJon Meacham.
IWarren G. Harding
IWarren G. Harding. Hulton Archive
Ngokuqhelekileyo ibekwe njengomongameli obalaseleyo wexesha lonke , u- Harding wakhethwa ngowe-1920 waza wathatha isikhundla ngo-1921 ethembisa ukubuyela ekuxolweni kunye nezoshishino njengesiqhelo emva kweMfazwe Yehlabathi I. Wakhetha abahlobo abaninzi kunye nabashishini kwikhabhinethi yakhe kwaye ezinye iiofisi, ezikhokelela ekuphatheni kwakhe okufutshane kukunye kwezona zinto zixhatshazwayo kwimbali yanamhlanje. Ngaphambi kokuba afe iminyaka emibili engumbongameli wakhe, u-Harding wayejongene nenani elinqabileyo lamacandal, ngokugqithiseleyo i-scapal yeTeapot Dome, eyayibandakanyeka kwimida yeoli kunye nokufumbathisa.
Ekugqibeleni, u-Harding wafa ngaphambi kokuba enze okunene-enjenge-Trump yokulawula, iintsuku zakhe zakudala e-ofisi zivelise encinci ngokubhekiselele kwimpumelelo, kunye neninzi yeendaba-ntshutshiso kunye nokuphikisana. Noko ke, kunzima, kwakunzima kakhulu xa wayesesikhundleni, kwaye waqhubeka ethandwa iminyaka emininzi emva kokufa kwakhe, kwaze kwaba yintoni emva kokuphanda kwaza kwacaca ubuninzi bezinye izigxeko, kunye ne-Harding yimiba emininzi yokuxhatshazwa. Enyanisweni, i-Harding's White House ngumzekelo wendlela yokulawulwa kwehlazo ngandlela-thile, njengokuba kwenziwa iinzame ezicacileyo zokumisa umongameli (ngubani, ngokuthe tye, akanakwazi ukufumana iinkcukacha ezininzi zeengxaki ezibi kakhulu).
Enye yezona ndlela ezilungileyo zokufunda iindlela ze-Harding zincwadi kaRobert Plunket ethi My Search for Warren Harding , yintoni iinkcukacha zokunyuka kwama-Harding kunye neminyaka emibili ephazamisayo kwi-White House.
Ulysses S. Grant. IfotoQuest
Ulysses S. Grant wayengummeli obalaseleyo kunye nobuchule, umkhankaso ophakathi kunye nompolitiki, kunye neentlekele enkulu yomongameli. Njengomntu oyinqoqo jikelele kwiMfazwe Yombango, uGrant wayeyindoda eyaziwayo kunye nokukhetha okulula kumongameli ngo-1868. Nangona wenza ixabiso elifanelekileyo ngelixa e-ofisi, ngokugqithiseleyo ukukhokela ilizwe ngokuvuselela (kuquka ukutshutshiswa ngamandla kwe-Ku IKlux Klan ngenzame yokutshabalalisa intlangano), iNdlu yakhe eNdlu yayimangalisayo - ngokukodwa- eyonakalisa.
Yintoni eyahlula iGrant evela kwi-White House ye-Donald Trump kukuba i-Grant ecacileyo yayingumntu othembekileyo kwaye ayizuzanga nakweyiphi na i-scandals ehlasela i-White House (eqinisweni, uGrant waphawula emva kokutshala imali okongqongileyo emva komongameli), ngelixa i-Trump ayibonakali ukuba ngummeli ongenatyala kwi-House House. Isigwebo esingenabulungisa xa sifike kubaqeshwa kunye nabacebisi benza ukuba ulawulo lwakhe luhlekise kwaye lwambeka malunga naluphi na uluhlu "lomongameli obalaseleyo", ngokuyininzi ngenxa yokuba akazange akwazi ukulungisa umkhumbi nangona xa ukugxeka kwakhe kulungiswe ukulawulwa kwakhe-nokuba ngaba iTump White House kulandela indlela efanayo inhlekelele ehleliyo. Ukufumana ingcamango engcono yendlela u-Ulysses S. Grant achitha ngayo ithuba lokuba ngumongameli wethu omkhulu, funda uRonald C. White wase- American Ulysses: Ubomi buka-Ulysses S. Grant .
Yaye ukuba ukhangelele ingqiqo ngqo kwi-administration yangoku, enye yeencwadi ezilungileyo ukuzifundela ngoku yiyona nto ihamba phambili nguMthengisi kaMtyholi nguJoshua Green, ophonononga ubudlelwane phakathi kweTrump kunye nomphathi wakhe oyintloko, uStein Bannon. I-Bannon ithathwa ngokubanzi kungekhona nje kuphela umakhi weTrump ukunqoba okumangalisa ukhetho lwango-2016, kodwa unelungelo lokulawula igunya kunye nefuthe kwiNdlu ye-Trump yaseNtshonalanga ukususela ngosuku lokuqala, nokuqonda indlela iNdlu ye-White Trump isabela ngayo kwiingxaki kunye neengxaki zezopolitiko ivela ngqo kwiifilosofi zeBannon kunye neenjongo.
Indlela yokuSondeza i-Smart: Isivumelwano
Indlela Yokubhiyozela Usuku Lomhlaba
I-'Gargo Al Factotum 'kaFilaro' Ephuma kwi-Barber yaseSeville '